LATEST: MDC Alliance youths strongly warn Morgen Komichi against trying to takeover Harvest House | My Zimbabwe News
Home News LATEST: MDC Alliance youths strongly warn Morgen Komichi against trying to takeover...
LATEST: MDC Alliance youths strongly warn Morgen Komichi against trying to takeover Harvest House
MDC Alliance Youth Assembly deputy spokesperson, Womberai Nhende, has warned MDC-T official Morgan Komichi against trying to takeover the party headquarters, Morgan Tsvangirai House formerly known as Harvest House.
Nhende’s remarks come after Komichi, on the aftermath of a Supreme Court ruling on the stewardship of the MDC-T which restored Thokozani Khupe as the leader of the party, instructed MDC Alliance leadership to handover all party assets to new MDC-T secretary-general Douglas Mwonzora.
Komichi’s instruction is being resisted by Nelson Chamisa’s supporters among them Nhende who posted on Twitter saying:
“Kwahi will take over Harvest House naKomichi 😂😂😂😂 Mdara it’s not about property it’s about your political disposition espoused in your proposition.. Huya tokudambura underpant ..you will get a rude awakening. Go and take over your conjugal rights on your GF from Malvern uko (Komichi is saying they will take over Harvest House, It’s not about your political disposition espoused in your proposition. Come, we will tear your undergarments… you will get a rude awakening. Go and take your conjugal rights on your girlfriend from Malvern.)
Meanwhile, Chamisa is yet to respond to the ruling.
– Womberai Nhende
Previous articleCoronavirus lockdown: Baboons and warthogs capture Victoria Falls town as residents stay home
Next articleNelson Chamisa’s ouster: New MDC-T Secretary-General Douglas Mwonzora speaks out